CIA VS. CPA - Nke Asambodo bụ Better? [It's a Close Call]
CIA vs CPA: Nke Asambodo kaara unu mma?
23 Aug CIA vs CPA: Nke Asambodo kaara unu mma?
Posted at 22:50h na Alternate Articles site Bryce Welker, CPA 1 Comment
Ọ bụ a tricky ajụjụ zaa: Kwesịrị ị na-a Gbaara Esịtidem Auditor (CIA) ma ọ bụ Gbaara Public ego (CPA)? Ma na-akwanyere ùgwù ọkachamara nzere na mma gị na nkà na-enwe ọganihu gị ọrụ, ma olee otú ị na-ahọrọ? Ka na-amalite site n'imebi ala ihe ọ bụla nzere ga-achọ na okwu nke oge nkwa ime, mgbalị, na-akwụ ụgwọ.
Gịnị bụ a CIA?
CIA vs CPA: asambodo chọrọ
CIA vs CPA: ụgwọ ọnwa
Gbaara Public Accountants na-atụ anya ịrụ ọrụ ha ethically. Gịnị? N'ihi na ha na-ahụ maka ịrụ ọrụ metụtara ọha na eze na-aza ajụjụ na ego akuko, dị ka ịkwadebe ego na nkwupụta, tax nkwadebe, na ndekọ idebe-niile dị na a set koodu nke ụkpụrụ. CPAs na-ndị naanị ha iwu na-ekwe ka banye na ido ego nkwupụta na IRS. Iji ghọọ a CPA ị ga-agabiga emezu CPA udomo oro na-ndinọ site AICPA. Ọ mejupụtara 4 akụkụ: Accounting na auditing, Business Environment na Concepts, Financial Accounting Akụkọ, and Regulation.
Iji ghọọ a CPA ị ga-agabiga emezu CPA udomo oro na-ndinọ site AICPA
Gbaara Esịtidem Auditors anya fọrọ nke nta nanị na-arụ esịtidem audits nke a ụlọ ọrụ financials na esịtidem controllers. CIAs nwekwara ike igosi audits nke ozi usoro, nnabata na ndị ọzọ na igodo esịtidem ogbugba ndu. Nke a bụ ọrụ chọrọ ka ị mgbe niile nwere na-erube elu ụkpụrụ. Dị nnọọ ka a CPA, na-a CIA ga-agabiga ihe udomo oro. The CIA udomo oro na-ndinọ site Institute esịtidem Auditors (IIA) ma ndị mejupụtara 3 akụkụ: Business Knowledge maka esịtidem auditing, Practice esịtidem auditing, na mkpa esịtidem auditing. Ị pụrụ ịmụta ihe banyere kacha mma CIA Prep ọmụmụ Ebe a.
Iji ghọọ a CIA, ị ga izute ndị na-esonụ chọrọ:
Riteworo n'ụgwọ afọ anọ post-abụọ ogo site na accredited mahadum. (Nke a nwere ike anam ọrụ ahụmahụ; ma ise ọrụ afọ ahụmahụ tinyere afọ abụọ nke post-abụọ akwụkwọ, ma ọ bụ afọ asaa nke kwupụtara auditing ọrụ.)
Afọ abụọ nke kwupụtara oditi ọrụ ahụmahụ (a eteufọk ogo pụrụ ịnọchi anya otu afọ)
Daha 3-akụkụ CIA Exam
Lezienụ niile na ọdabara ngwa na udomo oro ụgwọ
Nyefere a Agwa Reference Ụdị aka site na a CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, ma ọ bụ gị na-elekọta ọrụ
Ekweta noro site na IIA si Usoro nke Ethics
Nye ihe àmà nke njirimara
The oge chọrọ ịghọ CIA dịgasị ukwuu, dabeere na ọtụtụ nhọrọ maka nzuko agụmakwụkwọ / ọrụ ahụmahụ chọrọ. Ị ga mkpa 4 afọ na mahadum iji na-akpata Undergraduate ogo. Mgbe ahụ ị ga-mkpa 2 afọ nke mma-arụ ọrụ ahụmahụ, nke na-eweta ọnụ na 6 afọ. IIA enye ohere 4 afọ ruo udomo oro (nke na-nwere a nnọọ ala ngafe ọnụego), n'ihi ya, ọ nwere ike na-gị 10 afọ na-gbaara. Iji Bụrụ a CPA, ị ga izute ndị na-esonụ chọrọ:
Izute mmụta na ahụmahụ chọrọ nke U.S. ala na nke ị na-aga-ikikere. Ndị a bụ ndị dị iche iche site na steeti gaa na steeti, ma n'ozuzu chọrọ ịjụ gị ka nwere dịkarịa ala a afọ anọ ruo n'ókè na-aza ajụjụ, azụmahịa ma ọ bụ yiri ubi NA afọ abụọ nke general ajụjụ ọrụ
Daha anọ na-ngalaba CPA Exam
M ike ka ị anya ichoputa chọrọ nke gị ala n'ihu akasiakde gị CPA njem. N'adịghị ka CIAs, ndị na-mba gbaara, CPAs ga enweta a ikike maka ọ bụla ala nke ha na-eme. Ị ga-anọ gburugburu 5 afọ na-gị okokporo na / ma ọ bụ eteufọk ogo-emezu 150 kaadị hour chọrọ ka a CPA. Ọ bụrụ na gị ala na-achọ ọrụ ahụmahụ, mgbe tinye ọzọ 2 afọ. The AICPA enye ohere 18 ọnwa ruo CPA udomo oro. Nke ahụ niile na-agbakwụnye ruo 8 ½ afọ.
The CIA Exam bụ 100% compute dabeere na mejupụtara atọ dị iche iche akụkụ:
Part 1: Esịtidem oditi Basics
Part 2: Esịtidem oditi Practice
Part 3: Esịtidem oditi Knowledge Ihe
I nwere ike na-CIA udomo oro mgbe ọ bụla n'ime afọ mgbe ọ bụla otu n'ime 500+ Pearson VUE hiwere isi gburugburu ụwa. The udomo oro na-nyere na 16 asụsụ, na nsonye Arabic, Chinese (ọdịnala), English, French, German, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish, na Thai. Ọ bụrụ na ị bụ onye na IIA so, na-eri nke na-enyocha bụ $990. Non-òtù-akwụ zuru price na $1,150, nke mere na ọ bụ uru oge gị ịghọ onye na IIA so. The CPA Exam mee nke nkebi anọ:
Oditi na Àmà (AUD)
Financial Accounting na Akụkọ (nnọọ)
Business Environment na Concepts (BEC)
Dị ka CIA Exam, na CPA Exam bụ 100% kọmputa dabeere. Otú ọ dị, ọ bụ naanị na ndinọ via Prometric Testing Centers n'oge anọ ọnwa abụọ windo ofụri isua. The udomo oro na-adịghị nyere na March, June, September ma ọ bụ December. The na-eri nke CPA Exam dịgasị site ala / ikike, ma n'ozuzu àmà site $600 ka $800 niile nkebi anọ.
n'ozuzu, CPAs irite ubé karịa CIAs, ma nke a na ihe niile na-adabere na CIA ọrụ aha. Ihe ndị ọzọ nwere ike ikpebi a CIA ma ọ bụ CPAs ụgwọ, dị ka ebe, aha, na afọ ahụmahụ ga-ekpebi gị ụgwọ. The etiti ụgwọ maka a CPA bụ $62,123 na $59,677 maka CIA. Na nso nso, e nwere kemgbe a na-agụsi ina tightened ngosipụta na ụba nnyocha., Ndinam ọrụ ibu nchekwube maka ma CIAs na CPAs.
N'ezie, a niile na-adabere ihe ị chọrọ ime. The CIA asambodo bụ mfe iji nweta karịa CPA kemgbe udomo oro na-lekwasịrị anya 1 isi ihe nke ajụjụ, ebe CPA udomo oro dabeere 4. Ọ bụrụ na ị na-enwe banyere ọrụ na-ikpọ, na CIA asambodo ga-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ị na. N'akụkụ aka nke ọzọ, a CPA nwekwara ike ime auditing ọrụ ma nwere ihe ndị ọzọ ọrụ ohere na ebe nke ụtụ isi na-akọkwara, eke a ọzọ vasatail nzere. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ auditing, tax, akuko na ụkpụrụ, mgbe ahụ CPA ụzọ ga-akasị mma maka ị. Ọ bụrụ na ị chọrọ standout ọbụna ihe na ego n'ụwa, ị nwere ike ịga n'ihi na ma! Iji malite gị CPA njem, ị kwesịrị ị na-amalite site na-eme nnyocha ihe Review N'ezie ị ga-eji na-amụ nke udomo oro. Nke a bụ nke mbụ nnukwu nzọụkwụ! Tụlee TOP CIA Review ọmụmụ
Ịchọta ndị kasị mma CPA Review N'EZIE